Diyaaradaha Taxaalufka Carabta oo duqeyn ka fuliyay suuq ganacsi oo ku yaala Taciz. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Diyaaradaha Taxaalufka Carabta oo duqeyn ka fuliyay suuq ganacsi oo ku yaala Taciz.
On Dec 27, 2017 190 0
Maamulka Aala-Sucuud iyo dowladaha uu hogaamiyo ayaa dhibaato kawada dalka muslimka ah ee Yaman, halkaas oo dhowr sano oo xiriir ah ay ka socodaan dagaallo dhowr dhinac ka socoda.
Maalintii shalay oo Talaado ahayd, diyaaradaha Aala-Sucuud waxay duqeyn arxan daro ka geysteen magaalada Taciz, goob suuq ah oo ay dad badan ku sugnaayeen ayay diyaaraduhu duqeyeen, taas oo badisay khasaaraha.
Ugu yaraan 19 Ruux ayaa ku dhintay duqeyntan diyaaradaha Aala-Sucuud ka geysteen suuqa ganacsiga ee magaalada Taciz, waxaana la ogeyn sababaha ku riixaya Aala-Sucuud in si muuqato oo cad u beegsado dadka shacabka ah.
Hay’ado badan oo sheegta xuquuqda insaanka ayaa Aala-Sucuud ku eedayay in dhibaato iyo xasuuq uu ka wado dalka Yaman, waxaana uu maamulkan xiray dhamaan garoomada iyo dekadaha, taas oo keentay in macluul ay ka dillaacdo dalkaas baahi darteed, iyo cuntadii oo qaali ah waaba haddii la helee.
Cudurro halis ah ayaa dalka Yaman ka dillaacay baahida jirta awgeed, waxaana dadka ugu badan ee dhibkan uu saameeyey ay yihiin caruurta da’da yar.